कस्को पर्खाईमा छन केकी अधिकारी ? (भिडियो सहित) – An Online Entertainment News Portal
HomeEntertainmentकस्को पर्खाईमा छन केकी अधिकारी ? (भिडियो सहित)
September 15, 2017 Keshab Khadka Entertainment, Music, Video 0
टीका दाहालको शब्द तथा संगीत रहेको गीत ‘नौ डाँडा पारी’को म्युजीक भिडियो सार्बजनिक गरिएको छ ।बुढा सुब्बाले बजार ब्यबस्थापन गरेको गीतलाई एक हप्ता पाच लाख भन्दा धेरै पटक हेरिएको छ ।
आघा लामाको स्वर रहेको गीतमा नायिका केकी अधिकारी र दीपक परियारको अभिनय रहेको छ । आघा लामाकै संगित संयोजन रहेको गीतको भिडियो उत्कृस्ट बनेको छ। अस्ट्रेलियामा नै छायांकन गरिएको भिडियोलाई जीवन रसाइलीले छायांकन निर्देशन तथा सम्पादन गरेका छन् ।
बिहे गर्ने तयारी गरिरहँदा कपिललाई एक्कासी छोडिन् गर्लफ्रेण्डले